यस्ती भाईन तेरिया मगर, नेपाली फिल्म खेल्ने तयारी देखी प्रेम जीवन बारे यसो भन्छिन् तेरिया ? -हेर्नुहोस (भिडियो सहित) - Nepal Insider
यस्ती भाईन तेरिया मगर, नेपाली फिल्म खेल्ने तयारी देखी प्रेम जीवन बारे यसो भन्छिन् तेरिया ? -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
January 15, 2020 421
भारतको चर्चित डान्स रियालिटी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ र ‘झलक दिखला जा– ९’ की विजेता नेपाली मुलकी तेरिया मगर नेपालमा निकै कम बस्छिन् । केही वर्षयता उनी विदेशमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छिन् । भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेकी उनी केही दिनयता काठमाडौंमा छिन् । नृत्यमा पोख्त तेरियाको अहिले सुन्दरताको निकै चर्चा हुने गरेको छ । उनलाई केही समययता थुप्रै नेपाली फिल्मबाट अफर आइसकेको छ । उनीसँग बलिउड अभिनेता अभिनेता ऋतिक रोशनले समेत काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
गत वर्ष ‘मायाको मोल’ नामक नेपाली फिल्ममा उनको अभिनय रहने खबर बाहिरिएको थियो । तर, उनले यसको खण्डन गरेकी थिइन् । उनले फिल्म गर्ने खबरमा कुनै सत्यता नभएको प्रस्ट्याएकी थिइन् ।
धेरैपछि नेपाली फिल्म हेरेकी तेरियालाई ’बीर विक्रम २’ औधी मन परेछ । उनले क्लाइमेक्स सिनमा आफू निकै इमोसनल भएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ’मलाई फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो । प्याकेज फिल्म हो यो । सबै कलाकारले आफ्नो क्यारेक्टर राम्रोसँग निभाउनु भएको छ । मैले त एकदमै इन्जोय गरेँ ।’ व्यस्तताका कारण खासै नेपाली फिल्म हेर्न नपाउने बताउँदै उनले धेरैपछि नेपाली फिल्म हेर्न पाएको खुशी व्यक्त गरिन् । हेर्नुहोस केनाडा नेपालले गरेको यो मिठो कुराकानी….
Prevविदेशी बुढाको सुन र पैसा कुम्लो पारेर हिड्ने प्रमिला सुनार भेटिए।
Nextजुठाभाँडा माझेर गुजारा चलाउँछिन् कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही लाक्पा शेर्पा
‘ छातीमा देशको जिम्मेवारीको बिल्ला र हातले देशको नक्सा का ’ टेको देख्दा अचम्म लाग्यो
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (39590)